तपाईंको अर्को फिशिंग साहसिकका लागि आधारभूत सुरक्षा सल्लाहहरू - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
जुन 28, 2021 जुन 27, 2021 केनेथ पुग्छ ब्लग, विशेष समाचार, खेल
बाच गर्दा र क्याचलाई हटाउँदा हुकलाई ठीकसँग ह्यान्डल गर्नुहोस्।
चाहे तपाईं डु on्गामा हुनुहुन्छ वा छेउको छेउमा, चट्टानहरू, खोलाको किनारमा, वा किनारमा, लाइफ ज्याकेटले तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ।
निश्चित गर्नुहोस् जब तपाईं डु from्गाबाट माछा पक्रँदै जानुहुन्छ सँधै प्रथमोपचारको बक्सलाई आफूसँगै लैजानुहोस्।
फिशिंग एक रमाईलो मनोरन्जन हो शौक र साहसिक कार्यमा तपाई सहभागी हुनुहुनेछ। यद्यपि क्रियाकलापले चोटपटकको कम जोखिम उठाउँदछ, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं आधारभूत माछा मार्ने सावधानीका उपायहरूदेखि बेवास्ता हुनुपर्दछ।
एक सुरक्षित, आरामदायक माछा मार्ने सत्रको आनन्द लिनको लागि, तपाईंले सधैं आधारभूत माछा मार्ने सुरक्षा प्रक्रियाहरू मनमा राख्नु पर्छ। तपाईं पानी, वन्यजन्तुहरू, बीच-बीचमा बाहिरी अवस्था, र जोखिमपूर्ण उपकरणहरूको साथ संलग्न हुनुहुन्छ, तपाईं अरू केहि पनि पहिले आफ्नो सुरक्षा को बारे मा सावधान हुनुपर्छ। त्यसोभए, यदि तपाईं एक सुरू कोण हुनुहुन्छ भने, यी सुझावहरूलाई दिमागमा राख्नुहोस् अधिक रमाईलो र सुरक्षित ए experience्गलिंग अनुभवको लागि:
निश्चित गर्नुहोस् कि एसपीएफ 30० वा सो भन्दा बढिको ब्रोड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन।
किनारमा धेरै नजिक नखानुहोस्
यो Angrsrs को लागी एक ब्रेन टिप छ। पानीको धारमा धेरै नजिक नखानुहोस्, विशेष गरी जब तिनीहरू गहिरो छन्,
एक संग लामो दूरीबाट कास्ट गर्नुहोस् प्रिमियम फिशिंग रड त्यसोभए तपाईंले किनारमा माछा मार्नु हुँदैन। र यदि एउटा ठूलो क्याचले काट्यो भने, तपाईं त्यसलाई पानीमा फस्न सक्ने डर बिना संघर्ष गर्न सक्नुहुन्छ।
सूर्य सुरक्षा गियर लगाउनुहोस्
शुरुवातकर्ताहरूले यो अपेक्षाकृत सरल टिप्सलाई वेवास्ता गर्छन्, सोच्नुहोस् कि यो उनीहरूको एling्गलिंग साहसिक कार्यको लागि व्यर्थ हो। तर जब तपाईं घर बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईं आफ्नो छालाको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पार्नुहुन्छ। UV क्षति सूर्यको संपर्कमा हुँदा १ 15 मिनेट जति चाँडो हुन्छ। सबैभन्दा खराब कुरा के हो भने पानी र बालुवाले यूभी किरणलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, त्यसैले यसले तपाईंको एक्सपोजर बढाउँदै छ। त्यसकारण, निश्चित गर्नुहोस् कि एसपीएफ with० वा सो भन्दा बढिको ब्रोड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। सूर्य संरक्षण गियर लगाउनुहोस् जस्तै प्यान्ट, लामो बाहुला शर्ट, सनग्लास, र टोपी।
हुकहरूको ख्याल राख्नुहोस् किनकि उनीहरूले गम्भीर चोटपटक निम्त्याउन सक्छ। बाच गर्दा र क्याचलाई हटाउँदा हुकलाई ठीकसँग ह्यान्डल गर्नुहोस्। र, छोडेको हुकमा नछाड्न माछा मार्ने क्षेत्रमा उपयुक्त फुटवेयर लगाउने कुरा निश्चित गर्नुहोस्।
लाइफ ज्याकेट लगाउनुहोस्
चाहे तपाईं डु on्गामा हुनुहुन्छ वा छेउको छेउमा, चट्टानहरू, नदीका किनारमा, वा किनारमा, लाइफ ज्याकेटले तपाईंको जीवन बचाउन सक्छ। यदि तपाईं बच्चाहरूसँग माछा मार्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए उनीहरूले लाइफ ज्याकेटहरू पनि हरबखत लगाउनुपर्छ।
सूर्य संरक्षण गियर लगाउनुहोस् जस्तै प्यान्ट, लामो बाहुला शर्ट, सनग्लास, र टोपी।
माछा मार्ने उपकरण ठीकसँग प्रयोग र भण्डारण गर्नुहोस्
माछा मार्ने डण्ड र हुकहरूले चोटपटक निम्त्याउँदछ जब मिसह्यान्डल हुँदा। तसर्थ, जब प्राप्त वा भण्डारण तपाईंको माछा मार्ने उपकरण.
तपाईंको हुकलाई कभर गर्न वा हटाउन सुनिश्चित गर्नुहोस् र डर्डलाई समानान्तर समात्दै भूमिमा समात्दा यसलाई समात्दा। र किनारमा माछा मार्ने क्रममा, तपाईको छेउमा एr्गलरबाट १० मिटरको दूरीमा रहन निश्चित गर्नुहोस्।
कास्टिंग गर्दा, निश्चित गर्नुहोस् कि त्यहाँ पछाडि कोही छैन। जब तपाई ठूलो क्याचसँग लड्दै हुनुहुन्छ, त्यस्तै गर्नुहोस्। केहि माछाहरू चाराको बारेमा अनभिज्ञ हुन सक्छ, निश्चित गर्नुहोस् को प्रयोग गर्नुहोस् उचित लालच तपाईंलाई आफ्नो आदर्श माछा समात्ने उत्तम मौका दिन।
वन्यजन्तुमा नजर राख्नुहोस्
जनावरहरू खाद्यान्न मैदानको वरिपरि झुण्ड हुन्छन् वा जहाँ खाना स्रोतहरू प्रशस्त छन्। त्यसोभए, जब तपाईं माछा मार्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो माछा मार्ने ठाउँ नजिकै जनावरहरू छन् कि भनेर हेर्नुहोस्। एलिगेटरहरू, सर्पहरू, भालुहरू र अन्य आक्रामक जनावरहरूको स for्केतहरूको लागि हेर्नुहोस्। यदि तपाईं खतरा स see्केतहरू देख्नुहुन्छ भने, छिटो स्थानान्तरण गर्नुहोस् वा अझ राम्रो, प्याक गर्नुहोस् र नजिकै अर्को माछा मार्ने क्षेत्र फेला पार्नुहोस्।
प्राथमिक उपचार किट ल्याउनुहोस्
निश्चित गर्नुहोस् जब तपाईं डु from्गाबाट माछा पक्रँदै जानुहुन्छ सँधै प्रथमोपचार बक्सलाई आफूसँगै लैजानुहोस्। जब कुनै चोटपटक आउँदछ, तपाईं फेरि किनारामा जान चाहनुहुन्न तपाईको प्राथमिक उपचार आवश्यक प्राप्त गर्न।
माछा पक्रनु त्यस्तो रमाईलो शौक हो, तर यी सावधानीका सुझावहरूलाई दिमागमा राख्नु यो रमाईलो छ। रमाईलो गर्नुहोस्, सुरक्षित माछा मार्ने यात्रा!
चित्रित छवि स्रोत: Pexels
साहसिक खेलहरू सांप्रदायिक समाचार माछा मार्ने बाहिर सुरक्षा
केनेथ रेभ्स माछा मार्ने उत्साही मात्र होइन is ए—्गलिंग भनेको उसको उत्कट चाहना हो! दुई दशक भन्दा बढीको लागि एक उत्साही एr्गलर, केनेथ आफ्नो वेबसाइट परफेक्ट कप्तानको माध्यमबाट उत्तम स्रोतहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ।